डा. बावुराम र नेपालकाे अागामी राजनीति – JANAMATPOST.COM :: NEWS FOR ALL
डा. बावुराम र नेपालकाे अागामी राजनीति
२०७४, ४ पुष मंगलवार ०६:११
डा.वावुराम भट्टराईले गाेरखावाट चुनाव जित्नु भयो । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले तीन प्रतिशत थ्रेसहाेल्ड पार गर्न सकेन । याे यथार्थताका बीच वावुरामकाे महत्व र चर्चा बढ्दै जानुका केही खास वस्तुगत कारणहरू छन् जसलाई कसैले ईन्कार गर्न सक्दैनन् । ती कारण र निदानहरूलाई वावुरामले ‘५ स’ काे रूपमा शुत्रबद्ध गर्नुभएकाे छ । खासमा ती ५ स सामाजिक लाेकतन्त्रकाे सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर वावुरामद्वारा गरिएकाे नेपाल सुहाउँदाे राजनीतिक कार्यक्रमकाे बडाे सटिक व्याख्या र भाष्य हो । हाे न हाे, अागामी ५ वर्षसम्ममा वावुराम सही सावित हुनसक्छन् र नेपालीहरू एउटा वैकल्पिक राजनीतिक दलकाे रूपमा नयाँ शक्ति पार्टी नेपाललाई देश बनाउने माैका दिन सक्छन् भन्ने कुराकाे सँकेत अहिले नै देख्न सकिन्छ । बशर्ते वावुराम अहिलेका निम्नलिखित राजनीतिक सम्भाव्ताहरूवाट वर्जना गर्न सफल बनोस् । र अाफ्नै वाटाेमा अगाडि बढिरहाेस् ।
सामाजिक अभियन्ता एवं नयाँ शक्ति पार्टीका नेता ज्योति दनुवार
# वावुरामलाई वामपन्थी सरकारमा अर्थमन्त्री बन्न अान्तरिक र वाहिरी दबाव शुरू भइसकेको जस्ताे देखिन्छ । यसवाट भारत पनि खुशी हुने र नेपालका वामपन्थीहरू पनि अभयदान पाएकाे जस्ताे हुने स्थित बन्छ । अरूहरूका लागि वावुरामले अाफुलाई यसरी बलिदान गर्नु हुँदैन ।
# वावुराम जस्ताे डाईनामिक पर्सनालिटी नेपाली काँग्रेसमा अाउनुपर्छ र वामपन्थीहरूलाई दरिलाे चुनाैति पेश गर्नुपर्दछ भन्ने बहस पनि शुरू भएकाे देखिन्छ । यसवाट काँग्रेसले पनि पुनर्जीवन पाउने र वावुरामले पनि upgrading पाउने तर्क गरिन्छ । तर मक्किईसकेका पार्टीहरूकाे विकल्पमा अगाडि अाएर जाेखिम माेलेका वावुरामले पुनः हरिशरणम् गर्नुहुँदैन ।
# मधेशी पार्टीहरूसँग एकीकरण गरेर काँग्रेस र वामपन्थी दलहरूलाई एकसाथ चुनाैति पेश गर्ने कुरा त पुरानै भइसक्यो । तर स्थानीय चुनावकाे चाेट वावुरामले अहिले पनि विर्सेकाे नहुनुपर्ने हाे । सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपमा पनि मधेशी दलहरूसँग एकताकाे कुनै अर्थ छैन । जस्ताे कि अशाेक राईहरूले अहिलेसम्म पनि फाेरमसँग एकताकाे अर्थ खाेज्न सकेका छैनन् ।
# विवेकशील साझा जस्ता पार्टीहरूसँग पनि एकता गरि वैकल्पिक प्लेटफर्म श्रृजना गर्ने कुरा र बहस चल्छ । तर खान पुगाेस दिन पुगाेस् भन्ने सामन्ती र हिन्दुवादी साेँचवाट guided निम्न पुँजीवादी सम्भान्तहरूकाे वैचारिक धरातल र वावुरामकाे व्यापक वैचारिक अायतनकाे विचमा कुनै सँगति छैन । काठमाण्डाैँकाे मेयर वा ३ नं पदेशकाे मुख्यमन्त्री बन्ने लक्ष्य बाेकेकाे पार्टीसँग तत्कालै एकताकाे हताराेले गणितिय सन्तुष्टि त देला तर दीर्धकालीन राजनीतिमा कुनै जवर्जस्त याेगदान पुग्दैन ।
अतः वावुरामकाे लागि उत्तम वाटाे भनेकाे कम्तिमा ४ वर्षसम्म एकला चलाे काे रूपमा हिन्नुहाेस् । चुनावभन्दा १ वर्ष अगाडि दरिलाे alliance बनाउनुहाेस् र अागामी चुनावमा कुद्नुहाेस् । अनि हेर्नुस राजनीतिकाे मजा । देश तपाईले मात्र बनाउन सक्नुहुन्छ । अागामी ५ वर्षले याे कुरा सिद्ध गर्ला ।
(लेखक: सामाजिक अभियन्ता एवं नयाँ शक्ति पार्टीका नेता हुन् ।)